real estate broker Archives - Real Estate Blog - realtyWW:
Archives Tag: umrhwebi wokuthengisa izindlu nomhlaba
ezaposwa ngomhla Septemba 30, 2019 by Royal52
Gqi beliswa: Sep 30, 2019 10: 51
Izinto eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuba uqashe iarhente yezezindlu
Ukuthenga okanye ukuthengisa ikhaya ngumsebenzi onzima oya kufuna iinkonzo zomthengisi wezindlu. Ukuba ugqibela ngokufumana iarhente ethembekileyo yokuqhuba inkqubo, kuyenzeka ukuba ufumane indleko enkulu ngexesha elifutshane kunye nemali efikelelekayo.
Nazi izinto eziphambili ezikhankanyiweyo ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuqesha umthengisi wezindlu.
Into yokuqala ebaluleke kakhulu ngamava enokuthi iarhente yearhente yokuthengisa okanye ithengise kwinkqubo yokuthenga okanye yokuthengisa efanelekileyo. Akunyanzelekanga ukuba uqaphele inani leminyaka iarhente ibonelela ngeenkonzo zayo. Endaweni yoko, kufuneka ujonge iiprojekthi zakhe zangaphambili ukuze ubone ukuba angakwazi na ukuhambisa oko akufunayo okanye cha. Ukuba iarhente oyamkelayo inamava amahle okusebenza, iyakuba neyinethiwekhi enkulu yokukunceda ukuba uthenge indlu enqwenela ukuyithengisa kunye nendlu yakho ngexabiso elifanelekileyo.
5 (100%) 2 iivoti
exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ukuthengisa izindlu nomhlaba | ephawulweyo Iiarhente zezindlu, arhente zepropathi, Abarhwebi bepropathi, Umthengisi zindlu, umrhwebi wokuthengisa izindlu nomhlaba, Inkampani yendawo ethengisa izindlu nomhlaba, iiarhente ezithembekileyo | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Ngamana 8, 2019 by Royal52
Gqi beliswa: Meyi 8, 2019 03: 25
Izibonelelo zokufumana iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba
Uninzi lwabantu luthathela ingqalelo inkcitho kwizakhiwo nomhlaba zokuhlala, kodwa zisenokungahlali zisebenza. Oku kuhlala kunciphisa umda wokufumana izandla-kwipropathi. Kodwa ukuba ucinga ngokuchitha imali kwipropathi yokuhlala, unokucinga ukuba uza kuphulukana nezinto ezininzi.
Ithuba lokuthenga iarhente yokuthengisa ngokuthengiswa kwezezindlu likhulu, kwaye linokuba yingenelo ngokunjalo. Nokuba unokucinga ukuba umngcipheko mkhulu, iimbuyekezo zibhetele ngakumbi. Ukutyala imali kwiiarhente zorhwebo kunamathuba amancinci. Baza kuthwala imali eninzi, kwaye iya kuqhubeka nokuba yingenelo ngokunjalo. Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu | ephawulweyo arhente yepropathi yentengiso, Iiarhente zezindlu, arhente zepropathi, Abarhwebi bepropathi, Umthengisi zindlu, umrhwebi wokuthengisa izindlu nomhlaba, Inkampani yendawo ethengisa izindlu nomhlaba, iiarhente ezithembekileyo | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Disemba 30, 2017 by Royal52
Gqi beliswa: I-Dec 30, 2017 21: 11
Izinto eziyi-7 Zonke iiarhente zeearhente zeNdawo kufuneka zazi
Umthengisi wezindlu uxanduva lokunceda umthengi afumane impahla ngexabiso eliwela kwinqanaba lentuthuzelo yomthengi. Ukwaqonda iimfuno zabathengi zokuhamba ngenqanawa. Ngale ndlela, ukhusela abathengi kwaye ubancede ukuba benze eyona mvumelwano. Nangona kunjalo, unokufumana idrama yansuku zonke kwaye ufumane imeko engathandekiyo. Sisizathu; umntu kufuneka aqwalasele ezinye iinketho ngelixa esebenza rhoqo. Okulandelayo linani lezinto umenzeli mali ethengisa izindlu nomhlaba kufuneka azazi ngokufikelela phezulu kwishishini lakhe.
Kuya kufuneka wenze izicwangciso ngekamva lakho apho uzibona khona emva kwexesha elithile. Uza kuba phi emva kwenyanga, iinyanga ezintandathu, nonyaka omnye? Ukuseta imayilenzi emifutshane kunye nexesha elide kunye nokujolisa kuya kukunceda uphumelele kwaye uhlale ushukumiseka. Uza kuqala ukusebenza xa usazi ukuba usebenza ngokungaphaya kwithuba elithile. Qhubekeka ukufunda →
ezaposwa ngomhla Agasti 24, 2017 by Royal52
Gqi beliswa: I-Aug 24, 2017 20: 31
Ungazifumana njani iiAgents zeZindlu eziLungileyo eBristol
Bonke abantu abafuna ukuthengiswa kwezindlu nomhlaba ngokulula kufuneka babe nomnye wabathengisi bezindlu. Ungagcina i-80% yengeniso kwishishini lakho ngokuchitha isixa esithile kwi-arhente, kodwa owona mbuzo ubalulekileyo ebantwini malunga nokufumana eyona arhente kwintengiso yokhuphiswano. Ukuba negqwetha elifanelekileyo akuthethi ukuba basebenza kwenye yezona broker ezinkulu zokwenza imali. Inkcazo yearhente oyifunayo ubuxoki kumava obuchwephesha ebaleni kunye nokukwazi ukumamela imeko yomthengi. Ukulandela isimilo sokuziphatha kunye nokunxibelelana nomthengi kuhlala kuyinto ephambili kwiingcali. Ukuba ufuna ukufumana okungakumbi malunga nendlela onokuyifumana efanelekileyo ishishini lakho, kufuneka ulandele la manyathelo akhankanywe apha ngezantsi. Makhe sijonge kuzo zonke izikhokelo zokukhetha iarhente efanelekileyo. Qhubekeka ukufunda →